Horudhac: Manchester City vs Paris Saint-Germain… (Natiijada ay marti-geliyaasha u baahan yihiin si ay usoo baxaan, rikoorka Messi uu ka heysto Man City & Sergio Ramos oo…) – Gool FM
Horudhac: Manchester City vs Paris Saint-Germain… (Natiijada ay marti-geliyaasha u baahan yihiin si ay usoo baxaan, rikoorka Messi uu ka heysto Man City & Sergio Ramos oo…)
Ahmed Nur November 24, 2021
(Manchester) 24 Nof 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa caawa soo dhoweyneysa dhiggeeda Paris Saint-Germain is-araggooda labaad ee guruubka A ee tartanka Champions League iyadoo ciyaarii hore ay PSG soo adkaatay.
Man City ayaa u baahan kaliya inay guuldarro iska ilaaliso si ay u xaqiijiso usoo bixitaankeeda wareegga 16-ka tartanka horyaallada Yurub, waxayna sidoo kale soo bixi karaan haddii laga adkaado oo ay Club Bruges garaaci weyso RB Leipzig.
Dhanka kale, Paris ayaa u baahan inay guul hesho si ay ugu soo baxdo wareegga xiga ee bug-baxda xilli ay caawa markii ugu horreyso heli karto difaaceeda waayo-aragga ah ee Sergio Ramos oo aanan wali u safan tan iyo markii uu xagaagii kusoo biiray, waxaana uu caawa diyaar ku yahay magaalada Manchester oo ay ciyaarta ka dhici doonto.
Tartanka: Yurub – Champions League
Saacadda ay bilaabaneyso ciyaarta: 11:00 Habeennimo xilliga Geeska Afrika
Manchester City ayaa markale eegi doonto xaaladda saxiixeeda ugu qaalisan taariikhda ee Jack Grealish kaasoo dhaawac ku seegay ciyaartii horyaalka ee toddobaadkan, waxaase guud ahaan seegi doono kulankan Kevin De Bruyne oo laga helay xanuunka Korona Fayras.
Dhinaca PSG, warka ugu weyn waa helitaanka Ramos oo la filayo inuu kulankan qayb ka noqdo, waxaase suuro gal ah in kursiga keydka la dhigo ama daqiiqado yar uu ka ciyaaro kulankan.
Weeraryahanka Paris Saint-Germain ee Lionel Messi ayaa toddobo gool Champions League kaga dhaliyay Manchester City toddobi ciyaar oo uu kaga hor yimid.
Difaaca Manchester City ee Joao Cancelo ayaa si toos ah ugu lug yeeshay shan gool afartiisii ciyaarood ee ugu dambeysay Champions League isagoo dhaliyay labo gool sidoo kalena caawiyay saddex gool.
PSG ayaa guul la’aan ah saddexdii ciyaarood ee ugu dambeysay ee ay bannaanka kusoo ciyaartay kulan ka tirsan Champions League iyadoo labo barbarro gashay marna lasoo garaacay, waxayna halis ugu jirtaa inay guul ku weyso bannaanka guud ahaan kulammada guruubka hal xilli ciyaareed markii ugu horreysay tan iyo fasalkii 2004-05.
Chelsea oo garaacday Juventus xilli Barcelona taako loo dhigay & guud ahaan natiijooyinka kulammadii caawa laga ciyaaray UCL… SAWIRRO
Muxuu ka dhignaa goolkii uu xalay Cristiano Ronaldo ka dhaliyay naadiga Villarreal?